23 Iimviwo zeSiqinisekiso seSimahla se-Intanethi kwi-2022
Kweli nqaku, sityhile iimviwo ezingama-23 ezahlukeneyo zasimahla ezikwi-intanethi ezicetyiswa kakhulu. Ezi mviwo zinqumle kumacandelo ahlukeneyo okufunda kunye nomsebenzi kunye novavanyo lobungcali kwinqanaba lakho lokuvezwa kwezi nkalo ngesatifikethi esinokubakho ukugqitywa ngempumelelo.
Ufundile ubunjineli bekhompyuter, ulawulo lweprojekthi okanye ezinye izakhono kwi-Intanethi kwaye awuzange usifumane isatifikethi sazo?
Ungakhathazeki kwakhona, ungathatha uvavanyo oluku-intanethi oluhambelana nezakhono ozifundileyo kwi-Intanethi kwaye ufumane isatifikethi sakho wakube uthabathe uviwo kwaye waphumelela uphawu lokusika olufunekayo ukuze uqinisekiswe.
Iimviwo zesatifikethi ezikwi-Intanethi zihlawulwa ngabantu ukuba bathathe inxaxheba, kodwa emva kophando lwam, ndiye ndafumanisa ukuba kukho iimviwo zokufumana isiqinisekiso sasimahla kwi-Intanethi apho abantu kunganyanzelekanga ukuba bahlawule naziphi na iifizi kwezi mviwo kwaye bafumane isatifikethi esifanelekileyo.
Zithini izibonelelo zokuQinisekiswa kwi-Intanethi?
Ngaba zikhona iziqinisekiso zasimahla?
Iimviwo zasimahla zeSitifiketi se-Intanethi
Isiseko seKhompyutha kwiimviwo zeSatifikethi se-Intanethi
IsiNgesi iGrama I-Free Online Certification Exams
C Inkqubo yokuSimahla kweeSatifikethi seMviwo
Imviwo zeSayensi yezeNdalo eziSimahla kwi-Intanethi
Ukuziphatha kweShishini kwi-Intanethi isiQinisekiso seMviwo
Amandla oLwazi lweMathematics Simahla isiQinisekiso esikwi-Intanethi
Uviwo lweSatifikethi seSimahla kwi-Intanethi
Inkqubo yeJava yokuFumana isiQinisekiso esiSimahla kwi-Intanethi
Ulawulo lweProjekthi kuvavanyo lweSatifikethi simahla kwi-Intanethi
Ulawulo lwaBudlelwane baMakhasimende (i-CRM) kwiiMviwo zeSatifikethi saSimahla kwi-Intanethi
Uviwo lweMicrosoft Excel Simahla isiQinisekiso esikwi-Intanethi
Ukuthengisa nge-Intanethi Simahla isiQinisekiso seMviwo
Iinethiwekhi zekhompyuter iiSatifikethi seSimahla se-Intanethi
I-Python yeeMviwo eziSimahla kwi-Intanethi
IiNkonzo zeWebhu zeAmazon (i-AWS) zeeMviwo zeSatifikethi saSimahla kwi-Intanethi
AmaSpredishithi esiTayile esiHlathiweyo (i-CSS) kwiimviwo zeSitifiketi se-Intanethi simahla
Uviwo lokuFumaneka kweLungelo lokuSimahla kwi-Intanethi
Uviwo lweNkampani yasimahla kwiiSatifikethi seMviwo
Iindleko zeAccounting kwiMviwo zeSatifikethi se-Intanethi
U shishino Uvavanyo lweSimahla kwi-Intanethi
Intshayelelo yokufaka iikhowudi kubaQala kwiiMviwo zeSatifikethi se-Intanethi
Uyilo lweWebhusayithi lweSatifikethi seMviwo
Intshayelelo kuphuhliso lweMidlalo yoQinisekiso lweeMviwo
Iimviwo zasimahla zeSitifiketi se-Intanethi esenziwa nguGoogle
Izinto ezisisiseko kwiiNtengiso zeDijithali eziSimahla zeeMviwo
Isiphelo kwiiMviwo zeSatifikethi saSimahla kwi-Intanethi
Oku kulandelayo zizibonelelo eziza nokuthatha iimviwo ze-intanethi;
Yinkqubo esekwe kwi-Intanethi, ke ngoko, inazo zonke izibonelelo zokufunda okwenziwa kwi-Intanethi njengokuthuthuzeleka, ukuguquguquka, ukulungeleka, ukufunda okuhamba ngokwakho, njl.
Ukufumana isatifikethi sakho kwi-Intanethi akuyi kuchaphazela imisebenzi yakho yesiqhelo yemihla ngemihla, ngokungafaniyo nendlela iimviwo zesikolo esiqhelekileyo ezichaphazela ngayo eminye imisebenzi yomfundi.
Isatifikethi osifumeneyo sikunika ukuqondwa ngento onokuyenza kubasebenzi ngenxa yoko uzuze inzuzo ngaphezulu kwabantu abaneprofayile efanayo yomsebenzi.
Isatifikethi sakho siya kulolonga ikhondo lomsebenzi wakho kwaye sikukhombe apho uya khona ngokulandelayo.
Ukuqinisekiswa kwe-Intanethi yeyona ndlela ikhawulezayo, elula yokufumana isatifikethi ukuba ngaba ngabaqeshi bakho bayasifuna.
Isatifikethi senza iprofayili yakho yomsebenzi, njengeCV okanye i-Resume, ibonakale ngakumbi kubaqeshi.
Unokufunda nantoni na oyifunayo okanye oyifunayo ukuba uyifunde njengenxalenye yeprojekthi enkulu osebenza kuyo kwaye uqinisekisiwe.
Unethuba lokufumana ukunyuswa kwemivuzo okanye ukunyuselwa kwindawo osebenza kuyo.
Iyafumaneka kuye wonke umntu kwaye isatifikethi sikwenza ukuba ubonakale ngaphandle kokhuphiswano.
Ewe, kukho izatifikethi zasimahla onokuzifundela ikhosi kwi-Intanethi kwaye ufumane isatifikethi sakho. Abanye amaqonga okufunda online unikezela ngeenkonzo ezinjalo kubantu abanomdla.
Ngale nqaku, mfundi othandekayo, uya kwazi ngezi mviwo zasimahla ze-intanethi kwaye uqhubeke nokuthatha naziphi na iimviwo ezihambelana nezakhono zakho kwaye ufumane isatifikethi sakho. Ekugqibeleni unokwamkelwa ngokufanelekileyo kwizakhono zakho kwaye nantoni na onokuyenza.
Emva kophando oluninzi, ndakwazi ukuqokelela ezi mviwo zilandelayo zasimahla kwi-Intanethi kunye neenkcukacha zazo kunye neekhonkco zesicelo. Ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kubadwelisa;
Ngaba unazo izakhono zekhompyuter ezisisiseko kwaye ufuna ukujonga ulwazi lwakho ngentsimi? Emva koko thatha olu vavanyo lwe-intanethi simahla, isiQinisekiso seKhompyuter, esikunika ukuba uvavanye ulwazi lwakho malunga neengcinga ezisisiseko zekhompyuter kunye novavanyo oluquka neminye imibuzo malunga nesicelo kunye nenkqubo yesoftware.
Uvavanyo luya kuba ngesiNgesi kwaye uviwo luza ngohlobo lwemibuzo ekhethiweyo kwaye igubungela ezi zinto zilandelayo zesiseko sesoftware, iziseko zekhompyuter, isoftware yenkqubo, isoftware yesicelo kunye nokujonga ngaphezulu kwedatha.
Ixesha lovavanyo: imizuzu engama-20
Imibuzo Epheleleyo: 20
Amanqaku okupasa: 60%
Ukufumana izakhono zolwimi lwesiNgesi kuthetha ukuba uluqonda ngcono ulwimi lwesiNgesi, njengoko ukwazi ukuthetha nokwakha izivakalisi ngaphandle kwempazamo. Kutheni ungathathi igrama yesiNgesi simahla kwiimviwo zesatifikethi kwi-intanethi kwaye uqinisekiswe, isatifikethi kwicandelo liyakunceda ukukubeka ngaphezulu kwabanye ngeprofayile yomsebenzi efanayo kukhuphiswano lwabasebenzi.
Uviwo luya kugubungela izihloko ezinje ngegrama yolwimi lwesiNgesi, amaxesha egrama yesiNgesi, izenzi, ukwakhiwa kwezivakalisi kunye nokuchongwa kwempazamo. Ukuphumelela ngempumelelo kumda osikiweyo kuya kukufumanela isatifikethi.
Fumana isatifikethi kwiNkqubo ye-C ngokuthatha iimviwo zasimahla kwi-Intanethi, ezivavanya iikhonsepthi zakho kunye nolwazi olusebenzayo lwentsimi. Abaviwa abafuna ukuthatha olu vavanyo kulindeleke ukuba basebenzise iNkqubo ye-C kwimithambo embalwa enxulumene noko.
Olu vavanyo luya kugubungela izihloko zenkqubo ye-C ezinje ngedatha kunye nezinto eziguquguqukayo, imisebenzi, ukwazisa nge-C, uluhlu, izikhombisi kunye nezikhombisi, iingxelo ezinemiqathango kunye neziporo, abaqhubi kunye nokulandelelana kokubaleka.
Qinisekisa ubungqina besayensi yendalo esingqongileyo ukusuka kubunono kunye nentuthuzelo yekhaya lakho ngokuthatha olu vavanyo kuvavanya amandla akho ebaleni, ngale ndlela uza kubonisa abantu abafunekayo, njengomqeshi, ukuba uyawuqonda umxholo osisiseko wesayensi yendalo esingqongileyo isatifikethi.
Izihloko eziza kugutyungelwa kolu vavanyo zezixhobo zendalo, i-ecosystem, indalo kunye nolondolozo lwayo, ungcoliseko lwendalo, imiba yezentlalo kunye nokusingqongileyo. Dlulisa ukunqunyulwa kwaye ufumane ibheji eqinisekisiweyo yobungcali bakho.
Olu viwo luqukethe inani lemibuzo ekhethwayo eya kuthi isekwe kwiziseko ezisisiseko zokuziphatha kweshishini kwaye uphumelele ngempumelelo amanqaku ovavanyo aya kukuzuzela isatifikethi ebaleni.
Njengomntu oqinisekisiweyo wokuziphatha kweshishini, izakhono zakho kunye nolwazi lwakho ziya kufunwa yimibutho eyahlukeneyo yeshishini njengoko uyazi ukuba kunokunceda amashishini akhule ngaphaya kwemida. Fumana isatifikethi sakho sokuziphatha kweshishini namhlanje kwaye uhlale phezulu kukhuphiswano lwabasebenzi.
Ezezimali, ukuthengisa kunye namanye amasebe amashishini ahlala efuna abantu abanezakhono kwimathematika kwizikhundla zengqesho, unokuba nezakhono kwicandelo lemathematika kodwa ngubani onokuyamkela loo nto ngaphandle kokuba ubonise isatifikethi? Bambalwa kakhulu okanye akukho.
Eli lithuba lokuba ufumane isatifikethi kubuchule bakho bemathematics ngokuthatha uQeqesho lweMathematics simahla kwiimviwo zesatifikethi esikwi-Intanethi kwaye wenze iprofayili yomsebenzi wakho ibonakale ngakumbi. Qaphela le mimandla njengoko iya kuba sisihloko ekufuneka sigutyungelwe kuvavanyo: umyinge, umdla olula, isantya kunye nomgama, ukubala, umthetho wetyathanga, indawo kunye namanani.
UQoqosho ngokuqinisekileyo uyayazi indlela yokwenza ukuba ishishini liye phambili njengoko banezakhono eziyimfuneko kunye nolwazi lokufaka isicelo, kodwa ezoqoqosho eziqinisekisiweyo zinazo ezi zakhono kwaye zaziwa ngazo ngesatifikethi sokwenene.
Eli lixesha lokuba uvavanye izakhono zakho kwezoqoqosho ngokuthatha uviwo lwezoqoqosho olusimahla kwi-Intanethi, udlulise amanqaku afunekayo ovavanyo kwaye ufumane isatifikethi sakho ukuze ubonise abaqeshi ukuba uqinisekisiwe kwaye ufundile kwindawo yokufunda.
Izihloko eziza kugutyungelwa kolu vavanyo yintsalela yabathengi, uhlalutyo lweemfuno, ukomelela kwebango, iikhonsepthi zeendleko, uqikelelo lweemfuno kunye neziseko zoqoqosho.
Iinkqubo zeJava zifunwa kakhulu yimibutho yezobuchwephesha kunye neenkampani njengoko zinobuchule kwizicelo, kwiwebhu nakwiindidi ezahlukeneyo zezicelo ezisekwe kwikhompyuter.
Vavanya izakhono zakho kwiNkqubo yeJava ngokuthatha olu vavanyo lwasimahla kwi-Intanethi kwaye ufumane isatifikethi sokubonisa ukuba uyazi iikhonsepthi kunye nolwazi olusebenzayo emva kwentsimi. Iziseko zeJava, iintlobo zeedatha, iinguqulelo zokufikelela, isakhelo sokuqokelela phakathi kwezinye izihloko eziza kugqitywa kuvavanyo lwasimahla lwe-online certification certification.
Abaphathi beeprojekthi bafunwa kakhulu yimibutho njengoko benobuchule ekucwangciseni ngempumelelo, kulawulo nasekuqhubeni iiprojekthi ezichaphazelekayo nombutho. Kuba unezakhono kulawulo lweprojekthi, nali ithuba lokuthatha uvavanyo, uphumelele amanqaku afunekayo kwaye ufumane isatifikethi.
Ngesatifikethi sakho kulawulo lweprojekthi, ufumana inzuzo ngakumbi kunabantu abaneprofayile yomsebenzi efanayo neyakho, unokufumana ukunyuka komvuzo okanye unyuselo. Uviwo luya kugubungela izihloko zolawulo lweprojekthi ezinje ngeendlela zokuqikelela, umjikelo wobomi beprojekthi kunye nesoftware yolawulo lweprojekthi.
Abantu abanezakhono kubudlelwane babathengi bayadingeka kuyo yonke imibutho kunye nenkampani yeshishini ukuyila nokuseka unxibelelwano lwabathengi / lwabathengi.
Thatha ikhondo lomsebenzi wakho uye kwinqanaba elilandelayo ngokuthatha uvavanyo lweCRM kwaye ufumane isatifikethi esiya kuthi sibonakalise izakhono zakho ngalo mbandela, ngaloo ndlela kukwenze ukuba ube nakho ukuwenza nawuphi na umsebenzi kule ndawo.
Izihloko eziya kugutyungelwa kuvavanyo lweCRM kwi-Intanethi ziinkqubo zeCRM, isoftware yeCRM, uhlalutyo loshishino lweCRM, imisebenzi ephambili yeCRM phakathi kwabanye.
Olu vavanyo lubandakanya izihloko kwimisebenzi yamanani, imisebenzi yokubhaliweyo, iiwekhishithi, ii-MS ezigqwesileyo kwiziseko, kunye nomqolo, ikholamu, ukusebenza kweseli. Zilungiselele ukuthatha olu vavanyo ukuvavanya izakhono zakho nolwazi kwiMicrosoft Excel kwaye ufumane isatifikethi sakho.
Isatifikethi sakho seMicrosoft Excel sibonisa izakhono zakho kulo mbandela kwaye uya kwaziwa ngakumbi phakathi kwabaqeshi ngabaqeshi bakho kwaye ukwaluncedo lokufumana umvuzo okanye ukunyuselwa.
Ukuba unolwazi kweli sebe lokufunda uya kuqonda ukuba kuyafana nokuThengisa kwi-Intanethi. Izakhono zokuthengisa ezikwi-Intanethi ziyamangalisa, uza kusebenza kuye nabani na ovela kwikhaya lakho kwaye ahlawulwe, kodwa ke, ukwandisa isiseko sabathengi bakho kubalulekile ukuba ubambe isatifikethi ebaleni.
Isatifikethi sakho seNtengiso ye-E siyakwenza ukuba abathengi bakufune ngakumbi ngokwandisa isiseko sabathengi bakho kwaye sikwenze uhlawule ngakumbi ngeenkonzo zakho. Isatifikethi sakho siza kuboniswa esidlangalaleni kwiphepha lakho lemidiya yoluntu ukuze abathengi babone kwaye baqinisekise ubunyani bakho.
Zilungiselele uviwo njengoko ezi zihloko ziya kugutyungelwa: amagama okuthengisa nge-imeyile, ukujonga ngokubanzi ukuthengisa kwi-Intanethi, ii-7 Cs zokuthengisa kwi-Intanethi kunye ne-SEO.
Ngaba unayo ithiyori kunye nolwazi olusebenzayo lweeNethiwekhi zeKhompyuter? Eli ke lithuba lakho lokuthatha uvavanyo kwaye uqinisekiswe ebaleni ukubonisa ukuba ngubani na odinga izakhono zakho ukuba uchongiwe kuloo ndawo yokufunda.
Uvavanyo luya kugubungela izihloko ezahlukeneyo zenethiwekhi zekhompyuter phakathi kwazo ezinokuphindaphindeka, iiprothokholi, umaleko wezothutho, umaleko womzimba, ii-topologies, iimodeli zenethiwekhi, njl.njl. .
IPython luhlobo lolwimi lwenkqubo yekhompyuter kwaye uninzi lwabantu lunezakhono kule ndawo kodwa abanaso isatifikethi sokuyibonisa.
Nangona kunjalo, olu vavanyo lwasimahla lwesatifikethi esikwi-intanethi silapha ukuze uthathe inxaxheba kwaye ufumane isatifikethi sokubonisa amandla akho ePython. Zininzi izihloko eziza kugutyungelwa kuvavanyo kwaye phakathi kwazo ngamagama aguqukayo, iintlobo zamanani, inkqubo yokusebenza, ilifa, imo yokukhetha, ukuphathwa ngaphandle, njl. Ukwazi ezi zihloko kuya kukunceda ulungiselele iimvavanyo kwaye udlulise amanqaku afunekayo ukuze uzuze isiqinisekiso sakho sePython.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufumana isatifikethi solwazi lwakho lweeNkonzo zeWebhu kwiAmazon kunye nokuthatha olu vavanyo lwasimahla kwi-Intanethi, uviwo olunikezela isatifikethi xa usitya kwaye upasa ubuncinci benqaku elifunekayo.
Abaviwa kufuneka bagxile kwezi zihloko ukuze bapase, ilifu le-AWS, isiseko sedatha ye-AWS, inethiwekhi ye-AWS, umthetho olandelwayo we-AWS, i-AWS CloudFront kunye ne-AWS ezisisiseko.
I-CSS lulwimi olusebenzisa iinkqubo zekhompyuter kodwa ndicinga ukuba uyazi ukuba sele unazo izakhono kuyo kodwa akufuneki iphelele apho, qhubeka uqhubele phambili nomsebenzi wakho ngokuthatha iimviwo zasimahla ezikwi-Intanethi eziza kukunika ithuba lokufumana i-CSS isatifikethi.
Abaviwa kufuneka bagxile kwezi zihloko zilandelayo kwiimviwo zabo; I-CSS yokubhaliweyo kunye neetafile, umda kunye nokupakisha, i-CSS yemvelaphi, i-CSS Id kunye neklasi.
Uvavanyo olusengqiqweni lokufumana isiqinisekiso simahla kwi-intanethi luhlobo lwemibuzo emininzi ekhetha izihloko ezinje ngezihloko ezisisiseko, ukubala, iingxaki kuthotho, ubudlelwane kunye neengxaki zemo.
Ukwazi imixholo yezihloko zemibuzo kuya kukunceda ulungiselele ngakumbi uviwo lwakho kwaye ungaluphumelela kwaye ufumane isatifikethi sakho ebaleni.
Oku kungaziwa njengomthetho weshishini okanye umthetho weshishini kwaye licandelo lokufunda elilawula ngokusemthethweni amalungelo, ubudlelwane kunye nokuziphatha kwabantu, iinkampani, imibutho kunye namashishini. Ukuba unolwazi kunye nezakhono zeli candelo kutheni ungaqhubeki uthathe inxaxheba kuvavanyo lwe-intanethi kwaye ufumane isatifikethi sakho.
Ukwenza ulungiselelo lwakho loviwo kube lula ukukhangela izihloko kwinkcazo kunye nohlobo lwenkampani, ukumisa kunye nokuchithwa kwenkampani, imemorandam yombutho, ukuyilwa kwenkampani kunye neentlobo zenkampani, amanqaku ombutho kunye nethemba.
Thatha izakhono zakho zobalo phambili ngokufumana isatifikethi esiya kuthi sithethe ngezakhono zakho kubaqeshi ngokuthatha iimviwo zokufumana isiqinisekiso simahla kwi-intanethi.
Izihloko eziza kugutyungelwa kuvavanyo lobalo lweendleko ziziseko zophicotho-zincwadi lweendleko, ukuhlelwa kweendleko, ukubalwa kwemali okuthe kratya kunye nokubalwa kweendleko kuthelekiswa nobalo-mali.
Yiba ngusomashishini oqinisekisiweyo ngokuthatha iimviwo zasimahla kwi-Intanethi apho ufumana khona ukuvavanya izakhono kunye nolwazi kwindawo yesifundo kwaye ufumane isatifikethi emva kokuphumelela amanqaku afanelekileyo ovavanyo.
Ngelixa bafundela uviwo, abaviwa kufuneka bagxile kwizihloko zeshishini ezinje ngemithombo yemali eyinkunzi, ukulawula nokukhulisa i-venture, ubungozi bemali engacwangciswanga kunye ne-capital capital, ukuthengisa, isicwangciso sombutho kunye nezemali, kunye nokuphelisa umsebenzi.
Olu ayisiyiyo kwaphela iimviwo zokufumana isiqinisekiso sasimahla kwi-Intanethi, yikhosi yasimahla ekwi-Intanethi efundisa ukufaka iikhowudi kwabaqalayo kwaye emva koko baya kwenza imisebenzi eya kubafumanela isatifikethi sasimahla.
Ukwenza iikhowudi kukufuna izakhono ziinkampani zobuchwephesha kunye nemibutho kwaye eli lithuba lakho lokuntywila kwinqanaba lokuqala simahla, apho uza kufunda khona nge-HTML, i-CSS kunye nophuhliso lwewebhu ukusuka ekuqaleni kwaye ufumane isatifikethi emva kokugqitywa.
Obu bobunye ubuchule bedijithali obufunwa kakhulu emva kwezi ntsuku kwaye buya kukwenzela into eninzi xa ungena kule khosi kwaye ufunde imigaqo, iikhonsepthi kwaye ufumane izakhono zokuyila imizobo ezinokusetyenziswa kwiwebhu Isiseko esiphakathi.
Emva kokugqitywa ngempumelelo kwekhosi, ekwabandakanya ukupasa yonke imibuzo ephoselwe kuwe, uya kufumana isatifikethi.
Uyakothuka sisixa semali eveliswa luphuhliso lomdlalo kwaye kuba ngabantu ababaphuhlisayo oko kuthetha ukuba bahlawulwa kakhulu. Ngena kwihlabathi lophuhliso lomdlalo, qala ngeziseko zokugqwesa kwikhondo lokufumana isatifikethi emva kokugqiba ikhosi.
Ezi ziimviwo zasimahla ezikwi-intanethi ezibonelelwa nguGoogle ezinikezela isatifikethi sokwenyani emva kokuba umgqatswa kufuneka enze uviwo kwaye alupasile amanqaku ovavanyo.
Thatha olu vavanyo lwasimahla lwe-intanethi olunikezelwa nguGoogle ukuvavanya izakhono zakho kwiziseko ezisisiseko zentengiso yedijithali. Phambi kokuba abaviwa bathathe ikhosi banikwa ithuba lokuyifunda simahla emva koko banokuthatha inxaxheba kwiimviwo ukuze bafumane isatifikethi.
Isiseko sentengiso yedijithali sesinye sezona zakhono zifunwayo zedijithali, ukuba nolwazi olusisiseko kunye nesiqinisekiso sokubonisa oko kuya kunceda ukukhulisa ikhondo lakho lomsebenzi, kukufumanele umsebenzi omtsha okanye kukuphakamise emsebenzini.
Apho unazo zonke iinkcukacha kwiimviwo zasimahla zesatifikethi ezikwi-Intanethi ukomeleza izakhono zakho kunye nekhondo lomsebenzi kwisatifikethi osinikiweyo.
Ukufumana isatifikethi esisemthethweni kunokunyusa kakhulu amathuba akho okunyuselwa, ukonyuka komvuzo, ukuqeshwa, okanye ukuqala ikhondo lomsebenzi ophumeleleyo. Ungasoloko uncamathisela ezi zatifikethi kwiCV yakho okanye uQalise kwakhona njengoko izakwenza ukuba ibonakale inomtsalane kwaye ikwenze ubonakale ngathi unobungcali kubaqeshi kwaye ikunike igama phakathi koogxa bakho.
Ukufumana ubungqina obuqinisekisiweyo babaqeshi ukuba uyiqonda ngokucacileyo indawo ofunda kuyo onobuchule bokumisela isikhundla sakho kumbutho okanye kwinkampani.
Ungasoloko ulayishe izatifikethi zakho kwiprofayili yakho yemidiya yoluntu, njenge-LinkedIn, xa kunokwenzeka ithuba livele ngale ndlela ungahlala unxibelelana nawe ukunikezela ngeenkonzo zakho.
Iikhosi ezingama-30 eziGqwesileyo zokuQinisekiswa kwe-Intanethi
Iikhosi ezili-13 zoQeqesho kwi-Intanethi zaBafundi kunye naBasebenzi
IYunivesithi ezininzi zeToronto zasimahla nezihlawulelweyo kwiikhosi ezikwi-Intanethi
iimviwo zasimahla ze-Intanethiiimviwo zasimahla ze-Intanethi ezenziwa ngugoogleIzatifikethi zasimahla ezikwi-Intanethiiimviwo zokuqinisekisa kwi-Intanethi
Post Previous:Izikolo ezili-13 ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeMbuyiselo yeetshekhi kunye neelaptops
Okulandelayo Post:Ukubaluleka koLawulo lweNkunkuma kwilizwe jikelele
SEVİL MAMMADLI uthi:
April 9, 2022 kwi 5: 16 am
Disemba 21, 2020 kwi-6: 04 pm
Ngokwazi kwam, ii-caching cecert cecert ayizizo iziqinisekiso ezisemthethweni. Umzekelo, ezi zeMicrosoft aziveli kwiMicrosoft.